Wararka Ciyaaraha HNN – Page 2 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Archives»Wararka Ciyaaraha HNN (Page 2)
By admin on 23/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Sabti, Maarso, 23, 2019 (HNN)- Xiriirka kubadda cagta UEFA ayaa ku dhawaaqay iney baaritaan ku fureen laacibka kooxda kubadda cagta PSG ee Neymar JR kadib aflagaadadii uu u geystay garsoorihii hayay kulankii kooxdiisa PSG isaga hartay tartanka Uefa Champions League. 6dii bishii Marso ee sanadkaan waxaa garoonka kooxda PSG ka dhacay kulankii labaad ee PSG […]
Portugal oo barbaro lagu qabtay France oo guul weyn gaartay iyo natiijooyinka rasmiga ee is reeb reebka koobka qaramada Yurub.
Sabti, Maarso, 23, 2019 (HNN)- Xulka kubadda cagta Portugal ayaa barbaro 0-0 lagu qabtay cayaar ka tirsaneyd isreeb reebka koobka qaramada yurub ee 2020ka. Ronaldo oo kulankiisii ugu horeeyay qaranka Portugal cayaaray kadib kasoo haritaankoodii koobka aduunka ayaa awoodi waayay inuu wax guul ku hogaamiyo qarankiisa waxayna barbaro 0-0 kala kulmeen qaranka Ukraine. Dhanka kale […]
Sadaxleey kale; Sterling oo England ku hogaamiyay iney xasuuqaan Czech Republic.
Sabti, Maarso, 23, 2019 (HNN)- Laacibka kooxda Manchester City Raheem Sterling ayaa sadaxleydiisii labaad ku dhaliyay mudo 13 maalmood kadib markii uu qarankiisa England caawo u dhaliyay 3 Goal cayaar ka tirsaneyd is reeb reebka koobka qaramada yurub. England ayaa garoonka Wembley kusoo dhaweysay xulka Czech kulan katirsan is reebreebka koobka qaramada yurub ee 2020ka […]
Venezuela oo guuldaro xanuun badan kusoo dhaweysay Lionel Messi kadib markey Argentina ugu awood sheegteen 1-3.
Sabti, Maarso, 23, 2019 (HNN)- Xulka kubadda cagta Argentina ayaa guul daro xanuun badan kala kulmay dhigooda Venezuela kadib markii ay 1-3 ugu awood sheegteen. Lio Messi oo xulkiisa kasoo muuqday markii ugu horeysay tan iyo guuldaradii ay France kala soo kulmeen koobka aduunka ayaa awoodi waayay in xulkiisa guuldaro ka badbaadiyo. Venezuela ayaa bilowgii […]
PSG oo ku maqan dhanka Real Madrid, awood lacageedna isticmaaleysa!
By admin on 20/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Arbaco, Maarso, 20, 2019 (HNN)- Kooxda Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay diyaarineyso qorshe ay Real Madrid kaga soo qaadaneyso xiddigga khadka dhexe ka ciyaarra ee Toni Kroos marka la gaarro suuqa xagaaga. Ka dib guuldarradii la yaabka lahayd ee sida lama filaanka ah kaga soo gaartay Manchester United tartanka Champions League-ga wareeggiisa 16-ka, […]
Arbaco, Maarso, 20, 2019 (HNN)- Hooyada dhashay laacibka khadka dhexe ee kooxda PSG iyo qaranka France Veronique Rabiot sidoo kalana ah wakiilkiisa ayaa sheegtay in wiilkeeda uu maxbuus u yahay kooxda kubadda cagta ee PSG. Kooxda PSG ayaa cayaarista kubadda cagta ka joojisay laacibkaan maadaama uu diiday inuu qandaraas cusub saxiixo sidoo kalana waxaa aad […]
Arbaco, Maarso, 20, 2019 (HNN)- Laacibka kooxda kubadda cagta Chelsea Eden Hazard ayaanan meesha ka saarin suurta galnimada uu Real Madrid ugu biiri karo dhamaadka sanadkaan. Hazard oo haatan ku taamayo in kooxdiisa Chelsea kula guuleysto koobka Europe League ayaa yiri; “arintaas haatan kama fikiraayo, waxaan doonayaa inaan kooxdeyda Chelsea diirada saaro isla markaasnoa kula […]
By admin on 19/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Lionel Messi ayaa todobaadkan sedexleey ka dhaliyay kooxda Real Betis kulan ka tirsanaa La Liga oo ay Barcelona 4-1 guusha ku qaadatay sidoo kalena Leo waxaa u istaageen taageerayaasha kooxda Betis ee garoonka Benito Villamarin usoo daawasho tageen. Haddaba shabakada Marca waxaan kasoo xiganay 10-cayaaryahan oo ay dhacday inay u istaageen taageerayaal aan […]
Xherdan Shaqiri dhaawaciisa Liverpool qarineesay dhaqaatiirta Switzerland ayaa soo bandhigeen
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Kubad sameeye Xherdan Shaqiri dhawaanahan kooxda Liverpool uma cayaarin sidoo kalena 6-kulan ugu dambeesay macalin Jurgen Klopp toos uma adeegsaneyn cayaaryahankan. Haatan Xherdan Shaqiri dhawaacii uu qabay waxaa banaanka soo dhigeen dhaqaatiirta Switzerland oo baaritaan ku sameeyeen lana ogaaday gumaarka inuu ka dhaawacnaa dhowrkii todobaad ee ugu dambeesay waxaana laga saaray liiska […]
Macalin Zidane oo duulaan ku ah Liverpool wuxuuna ka doonayaa Sadio Mane
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Kooxda Real Madrid xagaagan waxay ku qasban tahay suuqa Yurub inay lacago adag galiso sidoo kalena cayaartooy tayo wanaagsan soo qaadato haatana waxaa la ogaaday in macalin Zidane qorshaha kowaad ugu jiro sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa Sadio Mane oo naadiga Liverpool ka tirsan. Ma ahan markii ugu horeesay Sadio Mane […]